Faldanbiyeed Aan La Shaacin Oo Taliyihii Saldhiga Kood-buur Shaqada Lagaga Qaaday | Marsa News
Faldanbiyeed Aan La Shaacin Oo Taliyihii Saldhiga Kood-buur Shaqada Lagaga Qaaday
July 24, 2018 - Written by editor marsan
Hargaisa:(Marsanews) Sida aynu la wada socono ama qormooyinkeenii hore ee cadaalad darada saldhigyada bilayska taala aynu kaga hadlaynay waxa aynu xusnay in halka sartu ka qudhuntay ay tahay seeska hoose ee ay ka soo unkanto cadaalad darada iyo tacadiga inta badan la kulma bulshada.
Sida aanu ku helnay warar xoogagaala oo la xidhiidha xilka xayuubinta taliyihii saldhiga Ibraahin Koodbuur ayaa naloo xaqiijiyay in uu mid ka mida maxaabiistii ku xidhnayd saldhiga kula kacay faldanbiyeed iyo xadgudubyo ka dhan ah shuruucda iyo qawaaniinta maxaabiista iyo waliba xuquuqal iinsaan ka ba.
Waxa ay wararku intaa ku darayaan inaanay dhacdadani ahayn mid ugub ah balse ay dhawr goor oo hore sidan oo kale dhacday balse tani ay noqotay mid soo shaac baxda halka kuwii hore la daday.
Xogaha dheeraadka ah ee aanu helayno ayaa tibaaxaya in dhinacii dhibanaha u ahaa taliya xilka laga qaaday ay dacwiyayaan oo raadinayaan in sharciga la horgeeyo, balse nasiib daro uu arintaa hortaagan yahay taliye fadal oo isagu ah horjoogaha guud ee bilayska islamarkaana samaystay taliyahan faldanbiyeedka galay iyo rag saraakiil kale oo aynu qormooyinkii hore ku soo xusnay.
Shabakada wararka Ee Marsanews waxa ay diirada ku hayn doonta oo aanu si dhab ah idiin kula soo socod siin doona xaalada warkani halka ay saldhigato iyo sida sharciga loo mariyo taliyahaa faldhan biyeedka kula kacay maxbuuska haatan dhibanaha u ah cadaalada.
Halkan kala soco waxii war ah ee ka soo kordha dhacdadani Ugubka Ah